မူလစာမျက်နှာ ဗွီဒီယို မြန်မာ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲများ
တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း ဆွေးနွေးခန်း Login / Register
Learning English VOA Burmese
နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ ၀၁. ၂၃. ၂၀၁၇
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ နောက်ထပ်တီဗွီအစီအစဉ်များ
ဇန်နဝါရီ 24, 2017
အစိုးရသစ် အိမ်ဖြူတော်ပထမဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဟာဆိုရင် သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲတွေ အားလုံးထဲမှာ Donald Trump ရဲ့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲကို လူကြည့်အများဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ အိမ်ဖြူတော် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Sean Spicer က တနင်္လာနေ့မှာ ထပ်မံ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတသက်တမ်း ၃ ရက်အကြာ Trump တရားစွဲခံရ သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး ၃ ရက်အကြာမှာတင် အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ဟာ သူ့အစိုးရအနေနဲ့ ပထမဆုံး တရားဥပဒေအရ အကဲစမ်းမှုကို ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Tillerson ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ်ခန့်ဖို့ လွှတ်တော်ကော်မတီ အတည်ပြု
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် အမည်တင်သွင်းခံရသူ Rex Tillerson ကို အတည်ပြုနိုင်ရေး အထက်လွှတ်တော် အမေရိကန်နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး ကော်မီတီက ကန့်ကွက်မဲ ၁၀ မဲ၊ ထောက်ခံမဲ ၁၁ မဲနဲ့ တနင်္လာနေ့က အတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။
ဇန်နဝါရီ 23, 2017
ဆီးရီးယား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံအဖွဲ့တွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဒီကနေ့ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကို ရုရှားနဲ့ တူရကီတို့က ကမကထပြု စီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတာ မျိုးမပါဘူးလို့ သူပုန်အဖွဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။
ကန်သမ္မတ အမ်ိန့်ကြေညာချက်အတော်များများ လက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိနေ
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ဟာ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ Paul Ryan နဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိသလို သမ္မတအမိန့်ကြေ ညာချက်အများအပြားကိုလဲ လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိပါတယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့် ကန်တောင်ပိုင်းမှာ သေဆုံးသူ ၁၆ ဦးရှိပြီ
ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းပိုင်းမှာ လူ ၁၆ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး၊ လူတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့ နောက်ထပ် မုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်လာဖွယ် အခြေနေရှိတယ်လို့ မိုးလေ၀သ ပညာရှင်တွေက သတိပေးထားပါတယ်။
အစ္စရေးခေါင်းဆောင် Trump နဲ့ ဆက်သွယ်
အစ္စရေး ၀န်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ဟာ သူ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အပတ်စဉ်အစည်းအဝေး ကို Jerusalem မြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ က ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက် အရေးပါတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ခေါင်းဆောင်သစ် Donald Trump ကို ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကန်သမ္မတသစ် Trump မက္ကဆီကိုသမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံမည်
သမ္မတ Donald Trump ဟာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ NAFTA မြောက်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံများ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်က ကိစ္စရပ်တွေကို ပြန်လည် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းဖို့အတွက် မက္ကဆီကိုသမ္မတ Enrique Nieto Pena နဲ့ ရှေ့သီတင်းပတ်အတွင်း တွေ့မယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 22, 2017
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ သမ္မတ Trump ဖုန်းစကားပြောမည်
အမေရိကန် သမ္မတ Donald Trump နဲ့ ဒီကနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ နှောင်းပိုင်းမှာ ဆွေးနွေး ပြောဆိုမယ်လို့ အစ္စရေးလ် ၀န်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu က ပြောပါတယ်။
Gambia အာဏာရှင် အာဏာစွန့်
ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ Gambia နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင် Yahya Jammeh စနေနေ့ ညပိုင်းမှာ နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာသွားတာကြောင့် ၂၂ နှစ်ကြာ လက်နက်ကိုင် အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်သွားပြီ ဖြစ်သလို ဒေသတွင်း စစ်တပ်က ကြားဝင်ရလု အခြေအနေရောက်နေတဲ့ အနောက် အာဖရိက နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ အခြေအနေကလည်း အဆုံးသတ်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးရေးရာ ချီတက်ပွဲ လူပေါင်းသိန်းချီစုဝေး အခုဝတ်ထားတဲ့ Pussy hat project ဆိုတာက Donald Trump ရဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေ၊ လက်သရမ်းခဲ့တာတွေကို နိုင်ငံတွင်းမှာသာမက နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးထုကနေ တညီတညွတ်တည်း လက်မခံဘူးဆိုတာ ပြသတဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးလွှင့် တီဗွီအစီအစဉ် နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ ၀၁. ၂၃. ၂၀၁၇
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို NLD ပါတီ အရေးယူမည်
Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ
ကချင်နဲ့မြန်မာစစ်တပ် မံစီမြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ရခိုင်ပြဿနာအတွက် အင်ဒိုနီးရှား အကြံပြုချက် ၄ ရပ်
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၁.၂၀.၂၀၁၇)
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ ၀၁-၁၈-၂၀၁၇
နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ ၀၁. ၁၇. ၂၀၁၇
စနေနေ့ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း ၀၁-၂၁-၂၀၁၇
ရခိုင်အရေးဖြေရှင်းရေး အချိန်ကာလတခုပေးဖို့ ဒု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပန်ကြား
အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ တပ်မတော် ကန့်ကွက်ရန်မရှိ
ဒုတိယအကျော့ ငြိမ်းညီလာခံအတွက် ပြင်ဆင်ဆွေးနွေး